Kooxda Dekedda oo markii saddexaad ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League – Gool FM
Kooxda Dekedda oo markii saddexaad ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League
(Muqdisho) 02 Luulyo 2019. Kulankii xiisaha badna ee u dhaxeeyay galabta kooxaha Muqdisho City Club iyo Dekedda FC ayaa ku soo dhammaaday 3-2 ay guushu ku raacday wiilasha Dekedda FC.
Qeybtii koowad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 2-2 goolka waxaa la horreysay Dekedda, Caadil ayaa u dhaliyay, balse waxaa ka barbareeyey Xasan Santo oo Muqdisho City Club ka tirsan ciyaarta ayuuna ka dhigay 1-1, isla qeybtii hore Muqdisho City Club ayaa goolkii 2-aad la timid waxaa u dhaliyay Cali Yare daqiiqado kaddib Dekedda goolkii barbaraha waxaa dhaliyay C/casiis Catoosh oo ciyaarta ka dhigay gar isku mid ah 2-2 sidaas ayaa lagu kala nastay dheesha.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambe ciyaarta wiilasha Dekedda ayaa dadaal dheer u galay inay dhaliso goolka guusha waxaana u dhaliyay Kabtankooda Cabaas Aamiin Maxamed, kulanka ayuuna ka dhigay 3-2 ay ku hoggaamonaysay Dekedda FC.
Waxaa xusid mudan in kooxda Dekedda kaarka cas laga qaatay qeybtii dambe ee kulankan, waxaana loo taagay daafaca bidix ee kooxdaas Cabdi-Weli waxaana ciyaartuna waxa ay ku soo dhammaaday 3-2 oo ay guusha ku qaadatay Dekedda FC.
Ugu dambeyn kooxda Dekedda FC ayaa markii 3-aad ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League.
RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay heshiiskeedii ugu horreeyay ee suuqan xagaagan... + SAWIRRO
Kooxaha Arsenal, Inter Milan iyo Tottenham oo xiddigo cusub la wareegay & Heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey… + SAWIRRO